Waa'ee du'a abukaatoofi ogeessa seeraa Abduljabbaar Huseen maal beekna? - ETHIOPIANS TODAY
Waggoota dheeraaf hidhamtootaa siyaasaaf abukaatummaan falmuun kan beekamu Abduljabbaar Huseen, garee abukaatota Jawaar Mohaammad, Baqqalaa Garbaa fi hogganoota siyaasaa kaaniif falman keessaa tokko.
Baatilee muraasa dura manneen murtii gara garaatti nama siyaasaa Obbo Lidatuu Ayyaaleewuuf falmuun bilisa akka bahu gumaacha olaanaa baheera.
Qondaalli olaanaa magaalaa Adaamaa BBC’n dubbise duuni isaa qoratamaa akka jiruufi namoonni bakka kufee argame jedhanitti turan to’atamu himaniiru.
Duuni isaa dhagahamuu sa’aatii muraasaan dura fuula Fesbuukii isaarratti odeeffannoowwan qoodamaa turan. Duuni isaa erga dhagahamee booda namoonni gadda isaanii miidiyaa hawaasaarra ibsaa jiru.
Ogeessi seeraa kun magaalaa Adaamaa ganda Gadaa ykn Ganda 12 jedhamuun bakka beekamutti kufee argamuu hogganaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa magaalichaa Obbo Makuriyaa Dinquu BBC’tti himaniiru.
Akka Obbo Makuriyaatti bakka kufe argamerraa gara hospitaala dhuunfaa Riifti Vaalii geeffamee achitti lubbuun isaa bahuu dubbatan.
“Manaa bahee kufee argame. Iddoo kufetti bilbila haadha warraa isaa namatti kennatee, bilbilanii haadha warraa isaa waamaniifi,” jedhu aanga’aan kun akkaataa du’a isaa yoo ibsan.
“Haati warraa dhuftee, hospitaala Riifti Vaalii geessitee achitti lubbuun isaa darbe,” jedhu Obbo Makuriyaan.
Kunis galgala keessaa naannoo sa’aatii sadii ta’uu himu.
Wanti qondaalli kun jedhan gabaasa marsaalee hawaasaa irratti ‘du’ee reeffi isaa argame’ jedhuun wal faallessa.
Waahila hojii isaa kan ta’ee ogeessi seeraa fi abukaatoo Obbo Gammachuu Guutamaa, “kaleessa [Roobii] galgala kufee argamee du’e, sababni du’a isaa hanga ammaa kana jedhamee hin beekamu,” jechuun BBC’tti himaniiru.
“Namni jalqaba bira gahe haadha warraa isaati, yeroo ishiin bira geessutti du’eetuma argame malee lubbuun bira hin geenye” jedha Obbo Gammachuun.
Kan aanga’aan nageenyaa magaalaa Adaamaa erga hospitaala gahee du’e jedhan odeeffannoo akka hin qabne Obbo Gammachuun BBC’tti himaniiru.
Hospitaalli Rifti Vaalii maal jedha?
Meedikaal direektarri hospitaala waliigalaa Riifti Vaalii kan magaalaa Adaamaa jiru Dr Laggasaa Alamaayyoo BBC’tti akka himanitti Obbo Abduljabbaar Husee wayita hospitaalicha gahu lubbuun keessa hin turre.
Tilmaamaan galgala naannoo sa’aa lamaa hospitaalicha gahuu kan himan Dr Laggasaan, “lubbuun waan jirreef, qorachuun barbaachisaa waan ta’eef, poolisoonni akka waamaman goonee, gara hospitaala mootummaa, hospitaala Adaamaa akka geeffamu taasifne,” jedhu.
“Madaa wayiillee wanti mul’atu waan hin jirreef, nu biratti wanni gargaaramullee waan hin jirreef konkolaatuma [baajaajii] ittiin dhufeen gara hospitaala Adaamaatti gaggeessine,” jedhan Dr Laggasaan.
Galgala wayita reeffi isaanii hospitaala Rifti Vaalii gahu maatiinillee akka waliin turan quba qabaachuus dabaluun himaniiru.
Yaada hospitaala Rifti Vaalii kenne irratti irra deebiin kan dubbisne hogganaan nageenyaa magaalaa Adaamaa Obboo Makuriyaa Dinquu, wanti ragaa qabatamaan dubbachuu danda’an bakka kufee argametti akka hin duunee fi haadha warraatti bilbila bilbilchiifatee baajaajiin gara hospitaala Rifti Vaalii geeffamuu isaa ta’uu himaniiru.
Erga hospitaala Rifti Vaalii gahee du’e odeeffannoon jedhu dogoggora ta’uu akka malu gaafatamanii ‘sana hin qulqulleeffanne’ jedhan.
Hospitaala Adaamaa erga geeffamee “doktoraan ilaallamee kan madaa’e ofirraa hin qabu, dhiigas ofirraa hin qabu, shakkiin yeroo sanitti doktoroonni kaasaa turan, sukkaaras qaba, dhiibbaa dhiigaas qaba waan ta’eef isa kaasaa turani,” jedhan.
Doktoroonni hiriyaa isaa ta’an ilaalanii madaas ta’e dhiiga akka ofirraa hin qabne mirkaneessaniiru jedhu Obbo Makuriyaan.
Hakiimni hospitaala Adaamaa BBC’n dubbise Roobii galgala reeffi isaa hospitaalicha gahuu fi ogeessi erga ilaalee booda qorannoo barbaachisaan achitti godhamuu waan hin dandeenyeef gara Finfinneetti akka ergamu godhuu isaanii himaniiru.
Reeffi isaa ganama kana Finfinneerraa gara Adaamaatti kan deebi’e yoo ta’u bu’aan qorannoo isaa garuu amma dura hin baramne.
Bakka kufetti of beeka ture kan jedhan Obbo Makuriyaan, namoonni achitti bishaan itti naqaa turan, sukkaara kennaniifi, xiqqoo akka dandamachuu ta’ee tures jedhu.
Kufee argamuu isaatiin dura eessa akka turee fi eenyu waliin akka ture qoratamaa jira kan jedhan Obbo Makuriyaan, namoonni lama bakka kufetti bira turan, kan bishaan itti naqaa tureefi kan haadha warraa isaatti bilbile to’annoo jala oolfamuu BBC’tti himaniiru.
Ija waahila isaatiin
Abduljabbaar waliin wayita inni abbaa seeraa ta’ee Harargee Bahaatti hojjetaa turerraa kaasee wal beekna kan jedhan, Obbo Gammachuu Guutamaa, “nama ogummaa isaatiif dhaabbate, nama seeraaf quuqamu, nama haqaaf quuqamudha,” jechuun ibsu.
“Nama hojii kanaaf, ogummaa kanaaf dabarsee of kenne, hawaasa ogummaa isaatiin gargaaruu malee, nama ofii kiyyaaf ofin jijjiira, ofin guddisa jedhee hin hojjenne ture,” jedhan.
Nama guddinaa fi ulfina ogummaa isaatiif jiraatedha jedhan. “Hiriyaa jabaa, nama guddaa dhabne, akka sabaattillee nama guddaa dhabne,” jedhan ogeessi seeraa fi abukaatoo Obbo Gammachuu.
Obbo Abduljabbaar Huseen abukaatoo ta’anii dhaabbachuu qofa osoo hin taanee, ol’aantummaa seeraa kabachiisu keessatti shoora matasaani taphataniiru kan jedhe paartiin Kongireesii Federaalawwaa Oromoo (KFO), du’a isaaniitiin gaddi guddaan dhagaahamuu ibsee, maatii fi firoottan isaaniif jajjabina hawweera.
Naannoo Oromiyaatti Koreen komaandi postii Tasgabbii Gabaa qindaa’uun Sochii eegaleera